On fév 11, 2020 5 698
Ankalazaina ny talata faha roa herinandro ny volana Febroary ny andro iray natokana ny Interineto na ny Safer internet Day. Anisany manamarika izany isika eto Madagasikara nanomboka ny taona 2019, iarahana amin’ny UNICEF sy ny ONG Youth First. Efa maro no mampiasa tambazotra-tserasera niomerika eto amintsika ahitana ny ankizy, tanora ny lehibe .
Tsikaritra anefa fa misy fiatraikany tsara sy ratsy ho an’ny ankizy izy io, noho izy izay tsy hahafantarana ny marina avy hatrany izay miseho ao. Mba ahafahana mifehy ireo ankizy dia efa misy ny fikambanana avy amin’ireo cyber café izay manokana toerana sy solosaina ho an’ny ankizy mijery internet ao aminy anisan’izany ny ao Toamasina. Eo koa ny fanentanana izay ezahina atao eny anivon’ny sekoly .
Ny 31 % ny an-tanadehibe ( fanadihadihana MICS2018) dia mampiasa avokoa ny internet , ny 1 amin’ny 6 amin’ireo anefa dia saika tanora avokoa ary misy ankizy. Ny fanadihadihana natao momba ny ankizy miditra amin’ny cyber café tao Toamasina I, dia mahatratra 313 izireo ,ny 65.38% amin’ireo ankizy dia saika manao jeux en ligne, ny , 59,62% dia mijery video no tena hatongavany amin’ny cyber cafe , 53,83% dia fijerevana hirahira ary ny 51,92% dia saika mahakasika ny réseaux sociaux anisan’izany face book.
Ho fisorohana ny ankizy tsy ho tratry ny loza vokatry ny internet dia nanao hetsika ny eo anivon’ny talem-paritra ny mponina Atsinanana ( MPPSPF), nanatanteraka ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora , nisy fanentanana natao tamin’ireo fikambanam-pinoana, Ray aman-dreny, mpampinatra , ny CSB indrindra fa ireo tompona cyber café , tao anatin’izay no teraka ny fahavononan’ireo cyber café ny hanaiky nanao Sonia ny fifanarahana iarovana ny ankizy amin’ny fampiasana ny internet.
ny Unicef dia nametraka tanjona izay naira-niasa tamin’ny mpanao gazety ( journalistes Amis des enfants ) teo koa ny cyber amis des enfants ho fiarovana ny ankizy manoloana mety loza mitatao amin’ny fampiasany ny internet.
Ho fanamarihana ity andro ny internet ity sy ho fampianarana ny rehetra indrindra ny ankizy dia nanomanana lalao application amin’ny face book ny Ong youth First izay afaka jerena ao amin’ny compte face book TSAIKY. Lalao roa no hita ao dia resaka momba ny fahafantaran’ny tsirairay ny zon’ny ankizy . ny iray momba ny sakafo omena ny zaza , ny faha .roa dia mahakasika ny fahafantaran’ny tsiairay ny internet .
ENTREPRENEURSHIP: TONY ELUMELU FOUNDATION DISBURSES FIRST TRANCHE OF $5m PARTNERSHIP COMMITMENT FROM AFRICAN DEVELOPMENT BANK